I-Miley Cyrus ihamba ze Iifoto eziNqabileyo kunye ne-PORN yangempela [2020 NGOKUTSHA] - Iphonografi Yoosaziwayo
I-Miley Cyrus ihamba ze Iifoto eziNqabileyo kunye ne-PORN yangempela [2020 NGOKUTSHA]
Jonga ingqokelela yokugqibela ka-Miley Cyrus iifoto ezinganxibanga apho abonisa khona i-pussy yakhe eshushu, kunye nevidiyo ye-porn ye-tape yomntu wesini!
UMiley wasendle kwaye uphambene wayeneengxaki ezininzi nge-iCloud yakhe, kodwa sonke siyalithanda icala lakhe elonakeleyo. Ngaphandle kwazo zonke iingxaki awayenazo kubudlelwane bangaphambili, ngoku siyazi ukuba uKoreshi ulala nabantu ababini. Ndingathanda ukuyibona itapee yesini evuzayo, kunye nentombazana kunye nendoda ebhedini enye! Siza kuqala ngo-Miley Cyrus uhamba ze iifoto ezivulekileyo kwaye emva koko sex tape yakhe yesondo, emva koko siya kuhamba nokuhamba!
UMiley Cyrus (oneminyaka engama-26) yimvumi yaseMelika, umbhali wengoma, kunye nomlingisi. Emva kokuba edlale iindima ezincinci kumdlalo kamabonakude 'u-Doc' nakwifilimu ethi 'Intlanzi enkulu' njengomntwana. Emva koko waba sisithixo esikwishumi elivisayo ngo-2006, owayedlala uthotho kumdlalo kamabonakude weDisney Channel 'uHana Montana' njengomlingisi uMiley Stewart. Utata kaMiley, imvumi uBilly Ray Cyrus, naye obekade efakwe kumdlalo weqonga. Ukuba sithetha ngothando lwakhe kunye nobomi bezesondo, uMiley umculi omnyama uNick Jonas, uJosh Bowman, uAvan Jogia, umlimi uMike UYA KUYENZA, umlingisi uJared Leto, uDane Cook, noPatrick Schwarzenegger. Phakathi kwamantombazana, wayenemodeli uStella Maxwell. Ngelixa wayefota 'Ingoma yokugqibela', waqala ubudlelwane kunye nomlingisi wakhe, uLiam Hemsworth, kwi2009. Emva koko babeqhekeka kwaye bexolelana amaxesha amaninzi. Utshate naye kunyaka ophelileyo kwaye uqhawule umtshato kwi2019.
Ividiyo kaMiley Cyrus ye-Porn-EVAKILEYO KWI-Intanethi
Sinezandla zethu kwividiyo yamanyala kaMiley Cyrus, ityiphu yesini evuthayo emva kokuba ikonsathi yenziwe emva! Le teyiphu ingene ezandleni zethu ngabagculi abavela eMelika abathanda ukumba kwii-iClouds zabantu abadumileyo! Ngeli xesha ixhoba yayiyimvumi eyaziwayo uMiley Cyrus, owayetshatile kwaye waqhawula umtshato kutshanje! Ungumntu wesini esahlukileyo, kodwa u-hubby wakhe wangaphambili akazange akhathazeke. Khawufane ucinge xa ​​ezisa amantombazana ekhaya ebhedini yakhe!
Njengoko bekulindelekile emva kweekonsathi, zonke iimvumi ziququzelela imidlalo ethile yesondo, kwaye uMiley Cyrus uyakuthanda ukudlala umdlalo obizwa ngokuba yintonga emlonyeni wakho, kwaye ulungile kuwo. Ngenxa yoko, uye oyise, kwaye afumane indebe ... idick emlonyeni wakhe! Ngapha koko, nantsi ividiyo nethemba lokuba uyakuyonwabela, njengoko ndenzile!
UMiley Cyrus uhamba ze kunye neMifanekiso evuzayo
Ekuqaleni, jonga u-Miley Cyrus nudes ngu-Brad Elterman kubo bonke kwiphepha elitsha likaJanuwari 2021 le-Rolling Stone:
Emva kokuba uMiley avuze kwiwebhu ngevidiyo yakhe yangasese ye-blowjob emva kwekonsathi, sicinge ukuba ayikho enye into anokuyenza. Kwaye lo henyukazi mncinci akayekanga ukwenza izinto zobubhanxa xa enxilile! UMiley usinika ngakumbi nangakumbi ngalo lonke ixesha evuza! Kwigalari engezantsi, kukho imifanekiso kaMiley echamela emhlabeni ngelixa esela ibhiya kwaye ebuza! Unezothe ngakumbi ngoku emva koqhawulo-mtshato.
Kwakhona, kukho ezibuza ebhedini kunye noStella Maxwell, ihenyukazi lesibini elitshatileyo! Kwaye kunemifanekiso emininzi apho bobabini bephuza khona kwaye bethathana. Endle njengesiqhelo, uMiley Cyrus wenza amanyundululu kwaye uyabuthanda ubomi bakhe! Ukusuka kulutsha oluhle uHannah Montana ukuya kumdaka, kodwa ishushu eshushu uMiley Cyrus! Akasoze atshintshe! Kukho imifanekiso engabonakaliyo kunye ne-naked ye-Miley encinci nayo! Ke ndicinga ukuba le yayiyindawo yakhe yokuqala yokuvuza kule ngqokelela!
UMiley Cyrus uchetyiwe kwaye unemifanekiso yeepussy ezinoboya
Jonga ingqokelela yemifanekiso eshushu kaMiley Cyrus pussy, emva kwe-porn yokwenyani! UMiley ubonise ubufazi bakhe amaxesha amaninzi, kodwa kufuneka sibonise le milomo ye-pussy ngokusondeleyo! Kukho neefoto zokuchama kwakhe ecaleni kwemoto kwaye ezi nudes zivela kwingqokelela ye-iCloud evuzayo kunye nemifanekiso evuzayo ayenzileyo noTerry Richardson, owasinika iimodeli ezininzi ze kwaye sonke siyazi ukuba uwathandile la mabhinqa! Sukwenza ngathi awuthandi ukucaphukisa amantombazana nokusela ipipi yabo! Ndinomntwana ofanayo!
UMiley Cyrus NudesUTerry Richardson
Wowu! Miley Cyrus iifoto ezinganxibanga ze-Candy magazine! Wonke umntu othanda i-S & M kufuneka ayibone le nto!
Umfoti owaziwayo UTerry Richardson Ndibe neseshoni entle noMiley Cyrus. Wayebuza yena ehamba ze. Wayedlala ngentonga yamapolisa kwaye eyikhotha. Kwimifanekiso emininzi, kukho ikati elingumlinganiso kaMiley Cyrus pussy, kwaye unesini esinye esihle! Inwele encinci, kodwa incinci kwaye iqinile. Ndibheja ukuba umgqakhwe omdala uTerry wayeyonwabela emva kweseshoni kuba siyayazi into uMiley athanda ukuyenza emveni kokuba egqibile ngomsebenzi wakhe… Zonke iifoto zenziwa ngohlobo oluthile lomoya we-S & M, oshushu kakhulu kunye nesini! Ekugqibeleni, soloko ukonwabela imifanekiso!
Ukuba ucinga ukuba uMiley Cyrus uzokuthula, ubuphosakele! Ihule lasendle lenza nantoni na eliyifunayo! Le mifanekiso ayisiyonto intsha, kodwa yayihlala ihlolwe, ke ngoku ungonwabela kwimbonakalo epheleleyo yeMiley ehamba ze! Igalari yenziwe ngeefoto ze-UHQ zikaMiley Cyrus nguTerry Richardson waseTumblr 2015, kodwa engavunyelwanga!
Okungakumbi Miley Cyrus Iifoto eziNqunu
Lungiselela ukubona i-celeb yakho oyithandayo unganxibanga kwakhona! Sinezithombe zikaMiley Cyrus ohamba ze ezenzela imagazini entsha Imicimbi ye'Phepha 'kunye' nePlastiki 'kwaye wambonisa ityholo elishushu! Amabele kaMiley abonwa amatyeli amaninzi, ke olu lusuku nje olunye oluqhelekileyo kubo, kodwa le pussy ayikhange ilibone ithotshi ukusukela kwi-nudes yakhe yangasese apho wayechola khona kwi-Intanethi! Yonwabela njengamaxesha onke, asiboni pussy encinci njengale yonke imihla!
IMiley Cyrus yePics ePaparazzi
Uyayenza kwakhona! Intombazana encinci ihlazo! Sabona uMiley Cyrus engenasiphelo kunye nolwandle kunye ne-ex-hubby yakhe U-Liam Hemsworth !
U-Miley Cyrus ubuthanda kakhulu ubunqunu, siyabona kwimifanekiso engezantsi ukuba wonwabile ngokwenene uhamba engenayo i-bikini yakhe ephezulu. Ukutsiba ngeenxa zonke ngokuchanekileyo njengeebhokisi zakhe. Kwakhona umfana athandana naye uLiam Hemsworth ukhangeleka onwabile, ndithetha ukuba ngubani ongayiyo, ukuba ezo zititi ziphambi kwamehlo am andizukuncuma ebusweni!
Siyayiqhela… UMiley Cyrus boobs ohamba ze ngelixa etshintsha impahla kwithambeka lendlu yakhe e-LA! Kwimifanekiso engezantsi sinokubona uMiley Cyrus etshintsha, kwaye ebeka ihempe, kodwa ngelixa esenza oko wabonisa zonke ii-boobs zakhe ezintle. Unama-boobs amancinci endalo, kum agqibelele. UMiley uyaziwa ngokunxiba ngendlela evusa inkanuko, kwaye ayisiyonto intsha evela kuye, kodwa ke, sihlala sonwabile ukubona umzimba wabasetyhini ohamba ze kule webhusayithi!
UMiley Cyrus uhamba ze-Ass kunye neeBoobs kwiVidiyo yoMculo
Imvumi yasendle Miley Cyrus iesile kunye neetits zibonwe njengoko wayengenasinxibo emva kokufota ividiyo yakhe yomculo yengoma ethi 'Wrecking Ball', kwaye kwabelwana ngaye kwi-intanethi! UMiley wayehamba ze amaxesha amaninzi, ke le ayisiyonto intsha, kodwa kufanelekile ukujonga nokukhuphela umxholo ocacileyo! Kukho uKoreshi ehleli ze ze kwibhola yekhonkrithi, ejinga kwaye asibonise amabele amancinci ashushu kunye neengono ezinamanzi!
ENTSHA Miley Cyrus Iifoto ezishushu
Jonga iifoto ezishushu zikaMiley Cyrus! Ezi zithathelwe icwecwe lakhe elitsha ngumfoti ogama linguVijat Mohindra! UMiley Cyrus ude wabonisa iitits kunye neesile lakhe kwezinye! Ke, qhubeka uskrola ezantsi kwaye wonwabe!
Miley Cyrus iingono Slip
Jonga ividiyo entsha kunye neefoto zika-Miley Cyrus ingono zentsimbi awabelana ngayo nebali le-SnapChat ngokwakhe! Le mvumi yasendle kunye nomlingisi sele esaziwa ngobuyatha, kodwa ngeli xesha ubonise indlela yokusombulula imeko! UMiley wayezibuza kwaye edanisa ikhamera, ngequbuliso waziva kwaye yonke loo boob yakhe yaphuma! UKoreshi wayigubungela nje kwaye wabonisa ulwimi, emva koko wangena kwijet yakhe yangasese!
Miley Cyrus Boobs -Jonga-nge-Mesh Shirt Ngelixa uthenga
Simqhele uMiley Cyrus ukuba angabi nazintloni… Ewe, wayingqina loo nto kwakhona! I-Scandalous Miley Cyrus tits edanyazayo ngelixa uthenga eSoHo. Wayenxibe isinxibo saphezulu ngelixa iititi zakhe zazithukwe ngokupheleleyo. Siyazibona iingono zakhe ezintle zisijonge ngathi ziyasibiza ukuba sizokukhothwa… Indlela yokuhamba Miley!
I-Miley Cyrus Tits kwi-Cleavage enzulu
Jonga ukuba wafika njani kwi-MET Gala! Ubonakalise i-yummy tits yakhe kwaye ke intsingiselo kaMiley Cyrus yayiyeyona inkulu ngeenxa zonke, ngelixa wayengenasibindi! Ewe, andiyithandi indlela yakhe yokubonisa ngezo saggy boobs. Kodwa ngubani owaziyo ukuba bangaphi abantu abathanda yena! Ukujonga nje okuqala kule galari emva koko utsibe ku-Miley Cyrus 'nudes evuzayo. Kukho iifoto zakhe zokukrokra, ecaleni kwetheyiphu yesini evuzayo kaMiley apho anike khona i-blowjob backstage emva kwekhonsathi! Yonwabele kodwa ungakhawulezi ngokukhawuleza, ubunqunu babantu abathandwayo buyeza!
Njengaminyaka yonke, obu busuku beeMbasa zeGrammy bezizele ngabantu abanomdla. Ke uyabona ukuba uMiley Cyrus oshushu osenyongweni wayengomnye wabo! UMiley wazola kancinci emva kokuba etshatile nomlingisi u-Liam Hemsworth, kodwa ngoku uqhawule umtshato kwaye ukulungele ukuba sendle! UMiley wayenxibe isuti emnyama kwaye iisuti zazikhululekile ukubetha ikhaphethi ebomvu yeGrammy 2019 eLos Angeles! Isuntswana lebhodi esecaleni ayiyonto xa ithelekiswa nento esele sikubonise yona!
I-Sexy Miley Cyrus yeenyawo ziQokelelwe iifoto
Songeze encinci, kodwa ingqokelela eyenziwe ngeyona Miley Cyrus yeefoto zeenyawo! Ubhengezwe njengenye yeeselebs ezinenyawo ezimbi. Kodwa sinobungqina bokuba unyawo luthatha abafana nezinzipho zakhe kunye nemilenze! Unesihogo seenyawo, sibi kakhulu, kodwa abantu bayazigungqa ezi! Ke hlala uyonwabele kwaye uyenze nzima iqhude lakho!
melissa benoist avuze ngesondo iteyiphu
UChristina hendricks amabhinqa ahamba ze
Ndiyathemba ukuba solo unganxibanga tumblr